Nhau, 02 Kukadzi 2013
Mugovera 2 Kukadzi 2013
Vagari vekuBuhera mubhuku rekwaMakumbe vanoti zvirimwa zvavo zvava kutsvukuruka nemvura yawandisa ivo vasina fetereza yekuisa muminda yavo.
Varume vana vanoita basa rekukorokoza vachichera goridhe munzvimbo yeTsvingwe, kuPenhalonga vakafa neChina manheru mushure mekunge nzvimbo yavaichera goridhe, yawondomoka.
MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai inoti yakavhara neChina kutora mazita evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo.
Econet Inopa Zvipatara neZvikoro Marambi Anoshanda neZuva
Kambani yembozhanhare, yeEconet Wireless, yapa marambi anoshandisa zuva zviuru zvitatu kuzvipatara nezvikoro zvekumaruwa.
Mumwe mukuru muchipurisa, Assistant Commissioner Everisto Pfumvuti, avo vanotungamira mapurisa kwaMutoko, vanoti vari kuda kupinda musarudzo kuMutoko South dzekutsvaga vachamirira Zanu PF musarudzo dzechaitwa munyika.
Gurukota rezvemari, Va Tendai Biti, vanoti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena uye, murunyararo kuitira kuti hupfumi hwenyika husimukire.
COPAC Inotambira Zviri Pamutemo Gwaro reBumbiro Idzva, Vamwe Vachinyunyuta
Nhengo dzose makumi maviri neshanu dzekomiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, yeCOPAC, dzasangana muHarare dzikatambira zviri pamutemo gwaro rebumbiro idzva.
Vanhu vanodarika mazana masere vaungana mubhuku rekwaMasveru mudunhu raIshe Makumbe ku Buhera vachionekana naMuzvinafundo John Makumbe, avo varadzikwa neChitatu kumusha kwavo.
Mutongi gava panyaya yeZimbabwe, uye vari mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, vakatuma nhumwa dzavo kuZimbabwe neChipiri kuti vanosimbisa nyaya yekuti misariridzwa pagwara resarudzo ipedziswe pasati paitwa sarudzo.
Nhengo dzose makumi maviri neshanu dzekomiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, yeCOPAC, dziri kutarisirwa kusangana muHarare nemusi weChina kuti dzitambire zviri pamutemo gwaro rebumbiro idzva